Ebe nkiri Sydney You gaghị echefu | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Atụmatụ, Sydney
Ọnụ ụzọ ámá Australia bụkarị Sydney Ma n'agbanyeghị na ọ bụghị isi obodo, ọ na-etinye uche, yana Melbourne, nnukwu njem nlegharị anya nke si mba ofesi. Ọ bụ oge a, nnukwu, obodo ọhụrụ nwere ọtụtụ ihe ị ga-eme, lee ma nwee ọ .ụ.
Ọstrelia bụ mba buru ibu ma dịkwa anya, n’ihi ya ebe mmadụ gara ebe ahụ, onye ahụ ga-agarịrị. Mgbe ahụ, ọ na-ewe ihe dịka ụbọchị atọ ma ọ bụ anọ na Sydney tupu ị tinye akpa gị azụ wee bido ileta ebe ndị ọzọ dịka Melbourne, Gold Coast, the Great Barrier Reef or Tasmania. Kedu ihe anyị na-agaghị echefu na Sydney? Chee echiche banyere ebe ndị a na ebe nkiri:
1 Ọdọda Sydney
2 Kayaking gburugburu Sydney Harbor
3 Rygbọ mmiri na njem
4 Na-eje ije site na Bondi ruo Coogee n'ụsọ oké osimiri
5 Rie ma drinkụọ n'ụdị na Sydney
6 Njem omenala ndị Aborigine
M na-etinye ya mbụ n'ihi na m kwenyere na nke ahụ ọ bụ a phenomenal mma. Ọ bụ akara ngosi nke obodo ahụ, nke na-adịghị na kaadi ozi ọ bụla. Ihe dị mma bụ na enwere ike ịrịgo na njem dị iche iche Na ọbụlagodi na ị na-atụ ụjọ elu ntakịrị, ọ ga-abụ njem a na-agaghị echefu echefu na Sydney.
Enwere njem ise ya mere i nwere ike ime ụzọ dị iche iche n’oge dị iche iche n’ụbọchị ndị a gụnyere ehihie, mgbede, na abalị. Ọnụahịa ndị ahụ adịghị ọnụ ala mana echere m na ọ bara uru ịrịgo na akwa mmiri Sydney. Ha na-amalite na 158 dollar Australia maka a dị mfe na ngwa ngwa ọrịrị na-akwụsị na ihe 388 dollar ọ bụrụ na ị chọrọ ịrị elu mgbe anyanwụ dara ma ọ bụ n’abalị.
Enwere nhọrọ nke na-agbanye ọkụ nke ụdị agba egwu 70s nwere ọtụtụ agba agba, agbanyeghị na ọ na-eme n'etiti May 26 na June 17. Edebere tiketi ahụ na .ntanetị ya mere ị nwere ike ide ihe niile tupu ị gaa Sydney.
Kayaking gburugburu Sydney Harbor
Anyị na-eche maka ezumike na-arụsi ọrụ ike, mana ekwenyere m na ọrụ ndị a ga-ahapụ gị nnukwu ncheta obodo Australia. Ọ bụrụ na ịnọdụ n'akụkụ mmiri a anaghị atụ gị ụjọ, ịnyịnya kayak dị mma. Na obere na obodo hà Sydney.
Ndị isi ụlọ ọrụ na njegharị ndị a bụ Freedom Outdoors ma bụrụ otu dị iche iche ruru mmadụ iri atọ. Enwere njem iri na asatọ ịhọrọ na Sydney na gburugburu obodo ahụ. Otu n'ime ọmarịcha njegharị na-ewega gị na ndagwurugwu dị larịị nke jupụtara na ụlọ nke oge ọchịchị, dịka ọmụmaatụ, n'akụkụ usoro Hawkesburry River nke iyi na ọwa mmiri.
Njegharị ahụ gụnyere Calabash Bay na mkpọmkpọ ebe nke ụlọ nkwari akụ wuru 130 afọ gara aga, wee gwụ na marina ebe mbụ ọ malitere ị toụ kọfị ma kesaa ahụmịhe dị ukwuu.
Rygbọ mmiri na njem
Sidney bu obodo ji oke obi oma na-ele anya n’oké osimiri, ya mere, ije ije n’èzí kachasị mma nwere ya. E nwere ike iji Sidney Ferries gaa njem n'ọnụ mmiri ahụ na ọdụ ụgbọ mmiri ya mere ụdịrị njem a ị nweghị ike ịkwụsị ime ya n'ihi na njem ahụ agaghị ezu oke. Bogbọ mmiri ndị ahụ na-acha odo odo na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma na-azụ ahịa kemgbe otu narị afọ na ọkara ka ha nwee akụkọ ihe mere eme nke ha.
Nde mmadụ iri na anọ na-eji ụgbọ mmiri a kwa afọ dịka ọrụ a na-ejikọ okirikiri Quay na ọdịda anyanwụ, ugwu na ọwụwa anyanwụ nke ụsọ oké osimiri. Fọdụ maka ọrụ na ndị ọzọ maka obi ụtọ, nke bụ eziokwu bụ na ịnara ụgbọ mmiri maka ndị njem bụ ọrụ. Enwere ferries 28 na-arụ ọrụ, n'etiti ụgbọ mmiri ochie ma ọ bụ nnukwu catamaran nke oge a. Nwere ike iru na Agwaetiti Cockatoo, ụlọ mkpọrọ mbụ, dịka ọmụmaatụ, iji Parramatta, Mosman , jegharịa Obodo Tawsons Bay ma ọ bụ mee njem nke Habren na-echekwa y lee n’elu mmiri ahụ ihe ngosi obodo dịka akwa mmiri ma ọ bụ Opera.
La Agwaetiti Manly Ọ bụ nnukwu ebe ịga ije, ịgagharị, gaa n'ụsọ osimiri ma ọ bụ nọrọ ụbọchị. Ọ dị nso na Sydney ma njem ahụ n'onwe ya mara mma. Ferries na Manly na-apụ ọkara elekere ọ bụla site na okirikiri Quay na njem ahụ na-ewe ọkara elekere. Ọ na-efu site na 4 Australian dollars.
Na-eje ije site na Bondi ruo Coogee n'ụsọ oké osimiri
Bondi Beach bụ la osimiri sydney, ebe imaara mgbe udu mmiri. Ijikọta ebe abụọ a na-egosi a kilomita isii na-aga ije n'ụsọ oké osimiri. Thezọ ahụ gafere ebe a na-eli ozu Waverley ma nye echiche ndị mara mma banyere Gordon's Bay.
You nwere ike ịnweta ihe ọ aụ aụ dị jụụ na mmanya Coogee Pavilion, mana nke mbụ ị nwere osimiri mara mma ị ga-anọ na ya, sunbathe, ma ọ bụ tinye ụkwụ gị n'oké osimiri.
Rie ma drinkụọ n'ụdị na Sydney
Sydney nwere nnukwu onyinye gastronomic na eziokwu enwere ọtụtụ saịtị na-adọrọ mmasị ma na-atụ aro mana taa ana m atụ aro abụọ: Spice Alley na Hacienda Ogwe. Spice Alley dị ka obere akụkụ nke Singapore ma na-etinye ụlọ nri na ebe a na-ere nri ụdị a. Ọ dị n’azụ Kensington Street dị na Chippendale.
E nwere ebe mepere emepe, ụdị patio, ebe ị nwere ike iri nri Nri Asia na efere si Vietnam, Thailand, Cantonese, Korea na Hong Kong. N'aka nke ọzọ, enwere Ogwe Hacienda, ụlọ mmanya nke ụlọ nkwari akụ ma nwee mmụọ Cuban doro anya. Nke a bụ Pullman Quay Grand Sidney Habrour mmanya na site na tebụl ya na oche ya dị ka ihe nkiri.
Osisi ime ụlọ na okooko osisi, sofas pastel, windo buru ibu. Ọ dị ka ị nọ na Miami ma ọ bụ Havana na '50s. Nwere ike ị forụ ihe ọ anyụ drinkụ ụbọchị ọ bụla n'izu ma ọ bụ nwee obi ụtọ mmanya na egwu n'abalị Fraịde na Satọde. Ọ na-emepe n’etiti ehihie ruo n’etiti abalị. Ahịa? Otu ihe, Heineken na-efu dollar Australia 9 na iko mmanya na-acha ọbara ọbara 14.
Njem omenala ndị Aborigine
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na i nwere mmasị na Omenala Aborigine nke Australia ị nwere ike banye maka Ọmarịcha Njem Ejiri Eke ileba anya na ndu na omenaala ndi ala anyi. Nhọpụta ahụ dị n’okpuru akwa mmiri dị na Sydney, n’ebe ahụ ị ga-ezute nwanne mama Margaret Campbell onye na-ebuga gị oge tupu ịchị achị.
Nwaanyị a ga-agwa gị banyere omume, ememe na omenala nke ndị Aborigine Australia. Na-agakwa na Botanical Gardens na njedebe ya niile na-ejedebe na nri na Gardener Lodge Café nwere efere nke agụ iyi, emu na kangaroo burgers.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Sydney » Ebe nkiri na Sydney nke ị na-agaghị echefu
Nleta Gastronomic na Andalusia (I)